पाल्पाका जनप्रतिनिधिको जवाफ – लाइन सोध्ने तपाँइ को हो ? कतिपय दोहोरो भुमिकामा, कोही खुल्दै – E Kutumba
By ईकुटुम्ब	 On Jan 7, 2021 0
नारायण न्यौपाने÷काठमाण्डौ, पौष २३- पाल्पाबाट लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ५ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्दछन । प्रमुुख तथा उपप्रमुख पदमा १० मध्य ६ स्थानिय तहमा नेकपाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन । एउटा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष निर्वाचित छन । केन्द्रमा देखिएको नेकपाको फुटको कारण जिल्लामा पनि कतिपयको कित्ता प्रश्ट भएको छ । कतिपयको भने व्यबहारमा एउटा र जवाफ अर्कै छ ।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहि प्रचण्ड नेपाल समुहले आयोजना गरेको ्यालिमा सहभागी भए । तर तपाँइ कुन लाइनको भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले मुस्काउदै भने, ‘अहिले हामि वयट एण्ड सी मा हो, स्टडी गर्दै हो । एकैठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ त्यस्तै उपप्रमुख लक्ष्मीदेवि पाठकले नेकपा ओली समुहले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा स्वागत मन्तब्य दिइन । तर तपाँइ कुन लाइनको हो ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन, ‘म त्यस्तो ओली, नेपाल प्रचण्डतिर परिन केरे, म त नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टि हो, म अरु केहि होइन ।’ ओली समुहकै कार्यक्रममा सहभागी रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष बिस्नु भण्डारीले एकता गरेरै जानुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘भोली कुनै न कुनै तिर त जानुपर्ला तर अहिले म मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’ त्यस्तै नेकपा ओली समुहलेनै आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी पुर्वखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराई पनी कुनै समुहमा नलागेको बताइन । बगनासकाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले पनि आँफु कतै नलागेको बताइन ।
नेकपाबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि भने खुलेर लागेका छन । रिब्दिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीले आफुँ खुलेर लागेको बताए । उनि नेकपा ओली समुहका केन्द्रिय सदस्य समेत हुन । उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनाल पनि ओली लाइनमा छन । निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त बहादुर शारुले ओली लाइनमा आँफु प्रश्ट रुपमा लागेको बताए । उनले भने, ‘ओली पक्षबाट राजनिती गर्न उहिल्यै खुलेको हो म त, उपाध्यक्ष पनी खुलेरै ओली समुहमा लाग्नु भएको छ ।’ पुर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापा पनि आँफु नेकपा ओली लाइनको भएको बताए । तिनाँउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ति मगरले संस्थापन पक्ष ओली भएकोले नेकपा ओली समुहमा लागेको बताए ।
पाल्पाबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने रमा घर्तीले आँफु कुनै गुटको सदस्य नभएको बताइन । अर्का सांसद डा. पुरनमान बज्राचार्यले केन्द्रिय नेताहरुलाइ मिल्नुपर्छ भनेको र कुनै पनि गुटको कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताए । नारायण आचार्य र युवराज खनालले आफँुहरु नेकपा ओली समुहको भएको बताए । त्यस्तै तुलाराम घर्ति बसन्तले तपाँइको लाइन केहो भन्ने प्रश्नमा भने, ‘म कुन लाइन हो तपाइलाइ थाहा छैन र ? तपाँइ को हो र मेरो लाइन सोध्ने ? म अहिलेसम्म कुन लाइनमा हो देख्नुभाको छैन र ? म तटस्थ काँहा हुन्छु ? मेरो लाइन प्रश्ट छ त प्रचण्ड नेपाल ।’
नेकपाबाट बिजयी ७ स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १३ जना मध्य ७ जना तटस्थ रहेका छन भने ६ जना ओली समुहमा खुलेका छन । ५ जना प्रदेश सांसदमध्य २ जना ओलीमा, १ जना प्रचण्ड नेपालमा खुलेका छन । २ जना तटस्थ रहेका छन ।
पाल्पामा २ हजार २ सय जनाका लागि कारोना बिरुद्वको खोप